Samsung ကရေးသားချက်များစံချိန် Q3 စမတ်ဖုန်းတင်ပို့ရောင်းချမှု - သတင်း Rule
Samsung ကရေးသားချက်များစံချိန် Q3 စမတ်ဖုန်းတင်ပို့ရောင်းချမှု
Samsung Electronics စံချိန်တင်တင်ပို့ 88.4 သူ့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယူမှတတိယသုံးလပတ်တွင်သန်းစမတ်ဖုန်း စျေးကွက်ပမာဏ အထက် 35 ရာခိုင်နှုန်းက, ပြိုင်ဘက် Apple ၏အချပ်မှုန်းစဉ်, သုတေသနလုပ်ငန်းဒေတာအင်္ဂါနေ့ကပြသ.
ဇူလိုင်-စက်တင်ဘာလကာလအတွက် Samsung ရဲ့စမတ်ဖုန်းတင်ပို့ရောင်းချမှုဟာမှတ်သား 55 အလားတူကာလပြီးခဲ့သည့်နှစ်ရာခိုငျနှုနျးကျြောတစ်ဟုန်ထိုး, လွတ်လပ်သောသုတေသနကုမ္ပဏီ Strategy Analytics Said.
တောင်ကိုရီးယားနည်းပညာကုမ္ပဏီ၏စျေးကွက်ဝေစုမှယောင်ပြီး 35.2 ကနေရာခိုင်နှုန်းက 32.9 ၏တတိယသုံးလပတ်တွင်ရာခိုင်နှုန်းက 2012.
Apple က posted 26 မှအလားတူကာလကျေ​​ာ်တင်ပို့ရောင်းချမှုအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကိုမြင့်တက် 33.8 သန်းယူနစ်. သို့သော်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ခြုံငုံနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်စောင့်ရှောက်ဖို့ပျက်ကွက် 45 ရာခိုင်နှုန်းကတိုးတက်မှုနှင့်မှနှစ်ပြီးသောကယ်လီဖိုးနီးယားကုမ္ပဏီ၏စျေးကွက်ဝေစု 15.6 ရာခိုင်နှုန်းသို့ 13.4 ရာခိုင်နှုန်းက.
Strategy Analytics က၎င်း၏ iPhone အသစ် 5s မော်ဒယ်မြင့်မြင့်ဝယ်လိုအားအပေါ် Apple ကစတုတ္ထသုံးလပတ်အတွင်းပြီးခဲ့သည့်မြေပြင်ကိုတက်စေပါရန်မျှော်လင့်ဟုဆိုသည်.
Apple ကတနင်္လာနေ့တွင်ဝင်ငွေရရှိမှုအတွက်တတိယဆက်တိုက်သုံးလတစ်ကြိမ်ကျဆင်းမှုဖော်ပြခဲ့သည်, Samsung ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတစ်ဦး posted စဉ် 26 တတိယသုံးလပတ်အမြတ်ငွေအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်, စမတ်ဖုန်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ချစ်ပ်ဝယ်လိုအားအားဖြင့်ကျားကန်.
တတိယသုံးလပတ်တွင်အကြီးဆုံးတင်ပို့တိုးတက်မှုနှုန်းတရုတ်၏ Huawei Technologies Co. , ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့, သောတင်ပို့ 12.7 သန်းယူနစ် — ထ 67 လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကမှရာခိုင်နှုန်းက.
ဤဆောင်ပါး, Samsung ကရေးသားချက်များစံချိန် Q3 စမတ်ဖုန်းတင်ပို့ရောင်းချမှု , ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2013 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
20179	0 အေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနကို, ပန်းသီး, တရုတ်နိုင်ငံ, iPhone ကို, iPhone ကို 5, Samsung က, Samsung Electronics, Strategy Analytics
← NSA အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအနေနဲ့စပိန်အတွက်ဖုန်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသန်းပေါင်းများစွာခြေရာခံ, အီတလီ: အစီရင်ခံစာများ ကားရပ်ရန်လောတလက်အောက်တွင်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေ Discover ဗိုက်ကင်းပါလီမန် →